25 Ngwá Ọrụ Ọdịnaya Ọdịnaya Dị Mkpa | Martech Zone
Anyị keere òkè n'oge na-adịbeghị anya 25 Awesome Social Media Marketing Ngwaọrụ si Mgbakọ 2013 Social Media Strategies. Nke a abụghị ndepụta zuru ezu, naanị ụfọdụ ngwaọrụ ị nwere ike iji bulie atụmatụ azụmaahịa nke ika gị, gụnyere ihe atụ pụtara iche nke ngwaọrụ ise gafere usoro ise nke ọdịnaya ọdịnaya:
Mmezi - Ngwá ọrụ ndị a na-enyere aka n'ịchọpụta na ikpokọta ọtụtụ ọdịnaya weebụ metụtara otu isiokwu, wee gosipụta ya na usoro nwere ike ịdị egwu. Ngwaọrụ: ndepụta, Storify, Curata, Kwusi elu Ikwu.
Ihe okike - Ngwá ọrụ ndị a kachasị baa uru na-enyere gị aka iji anya nke uche gị hụ ọdịnaya dijitalụ n’ebughị ụzọ nye ndị na-emepụta ihe. Ngwaọrụ: Ihe Ọmụma, Lingospot, View.ly, Kwado.
Chọta ndị dere ọdịnaya - Iji mepụta ọdịnaya dị ukwuu maka ika gị, ị ga-enwerịrị onye ga-arụ ọrụ ahụ. Ngwaọrụ ndị a na - enyere gị aka ịchọta ndị edemede na ikekwe ndị na - emepụta ihe iji mepụta nnukwu ọdịnaya niile ị bu n’uche. Ngwaọrụ: Ederede, Contently, Eluigwe, zeri na Onye edemede.
Nkwalite ọdịnaya na nkesa - Inwe oke ọdịnaya ezughị ma ọ bụrụ na ekesaghị ya na mbara igwe ma ọ bụ ndị na-ege ntị. Ngwá ọrụ ndị a na-enyere aka ijide n'aka na a hụrụ ma pịa ọdịnaya gị. Ngwaọrụ: echekwa, Ọpụpụ, Ọdịnaya BLVD, ndọda na OneSpot.
Marketing nchịkọta na nsuso - Ozugbo ekesara ọdịnaya n'ofe nyiwe, jiri ngwaọrụ ndị a iji soro nsonye na nyochaa ịdị irè. Ngwaọrụ: Webtrends, Na-aga n'ihu, Marketo, amamihe, Mgbaghara.
Tags: Mgbakọ 2013 Social Media StrategiesNa-aga n'ihuntupooỌdịnaya BLVDngw’oru ahia diContentlycurataikwughachiọgụgụ isiEzigbondọdaissuuIhe ỌmụmaLingospotndepụtaKwusi eluahịaOneSpotmpụgamgbagharakwadoroEderedeokwu eluigweStorifyanya.lywebụsaịtịOnye edemedezeri
Ndewo Douglas. Ihe omuma ihe omuma di egwu na ahia ahia. Daalụ maka ndepụta nke ngwa ọrụ, achọrọ m ndepụta ndepụta usoro nyocha na nyocha. Daalụ maka nke ahụ